“Nofinofiko Ny Hitondra Ny Aterineto Ho Ao An-Tanànako” Fanomezana Voninahitra Farany An’i Boukary Konaté Avy Amin’ireo Akaiky Azy Sy Namana Mpiaramiasa Taminy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Septambra 2017 2:13 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, русский, Español, Français
Boukary Konaté, iray amin'ireo mpisavalalan'ny tranonkala ambanivohitra tao Mali, nodimandry tao Bamako ny 17 Septambra 2017 vokatry ny areti-mandoza nanjo azy.
Iray tamin'ireo mpisavalàlana tamin'ny fanapariahana ny tranonkala tao Mali i Boukary, tamin'ny alàlan'ireo tetikasa isankarazany nataony mba hahatonga ny aterineto ho azon'ny Maliana rehetra idirana, tsy nanavahana toerana jeografika na fari-panànana. Nirotsaka nanao tetikasa marobe izy mba hampiroboroboana tety anaty aterineto ny tenindreniny, ny bambara, ary mba hampivoarana ny fidiran'ny faritra ambanivohitra ao Mali amin'ny aterineto tamin'ny alàlan'ny tetikasany Rising Voices Ségou Villages Connection.
Na dia tsikeraina hatrany noho ireo loza isanandro afafiny aza ny tambajotra sosialy, toy ny fanelezana ireo vaovao faikany, ny filambaniny ary sotasota atao amin'ny alàlan'ny tranonkala, ny torohay manototra tafahoatra, ny fampirafesana ny fomba fijerin'ny vahoaka na ny fiankinandoha amin'ny tranonkala, dia toy ny tany lonaka iray an-tany efitra i Boukary teny anivon'ireo tambajotra afrikàna noho ny finiavany hizara ny tsara indrindra azo amin'ny tranonkala ary tsy nandosirany ireo sakàna goavana, na ilay fironana hisintona ny tontolon'ny tranonkala hilentika ambany, izay mandrava tsy misy fanàfany ireo vondrom-piarahamonina niomerika manerana ny tany. Mitomany ny famoizana iray amin'ireo mpikambana tena mamin'ny fony ny vondrom-piarahamonina Global Voices. Fijoroana vavolombelona avy amin'ireo namany mba ho fanomezana voninahitra farany ilay fiainana iray mendrika, feno fitiavana ny maha-olona ary nanolotra ho an'ny hafa :
Nandao antsika aloha loatra i Boukary Konaté, ilay lehilahy marotsaka kely saingy goavana ao am-pony..Sarotra ny hanazava amin'ireo tsy nahafantatra azy ny zavatra nentiny ho an'ny fiarahamonina nisy azy, saingy izy no vatana hita maso itarafana izay tsara indrindra teto amin'ity tany ity sy ny fahamendrehana maha-olonkendry eny anivon'ny olona rehetra.
Ny vondrom-piarahamonina GV: Amin'alahelho lehibe no ampandrenesanay anareo ny fahalasanan'ny namana sady mpiaramiasa taminay Boukary Konaté, omaly tany Bamako rehefa nolazoin'ny aretina nandritry ny fotoana fohy.
Tsy manam-paharoa ny tantarany, araka izay nanambaràny azy tato anatin'ity rohy ity tany am-piandohany niaraka tamin'ny GV https://fr.globalvoices.org/2009/09/06/18655/ , ary mahagaga mihitsy aza. Goavana be ny asa nataony ho an'i Mali fireneny, ary indrindra fa ho an'ilay vohitra niaviany, hatramin'ny fitahirizana ny kolontsaina sy ny fomban-drazana ka hatramin'ny fanelezana ny aterineto.
Tena ho fahabangàna goavana ho anay ny fahalasananao ry rahalahy Boukary. Handry am-piadànana anie ny fanahinao.
Claire Ulrich: Androany dia namoy ny namanay Bopukary avy ao Bamako izahay. Ho maivana aminy anie ny tany hanototra azy. Namana tsy hay soloina no nafoin'ireo namany avy ato amin'ny Global Voices.
Anne Greffe: Alahelo tsy msy toy izany… Olona tsara loatra, niandohan'ireo fandraisana andraikitra tsy manam-paharoa, nisy famoronana ary feno fandavantena…Famoizana goavana.
Suzanne Lehn Miaina fiadanana i Boukary. Ary izahay kosa anaty alahelo, tsy hay sitranina. Mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany.
Mina Harker: Ry namako, ny kolontsainao, ny fahalalànao, ny fahendrenao dia ho fahabangana eo amiko ary tena ho fahabangàna ho an'ny maro. Ho maivana aminao anie ny tany anotorana anao. Mandria am-piadànana ry namako.
Ny Global Voices dia manolotra ny fiarahamiory sy fampiononana feno ho an'ny fianakaviany sy ireo akaiky azy.